ENGLISH FOR SUCCESS: ဘာသာစကားတစ်ခုသင်မယ်ဆိုရင်….
Posted by Winkabar at 8:16 PM
အမြဲပြောတယ် အသက်ကြီးပီ စာမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာလေ
ကျွန်မ အမြဲတမ်း စိတ်မကောင်းဘူး အဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်တိုင်း တစ်ခုခုပြန်ပြောချင်တဲ့စိတ်ကို
ကျွန်တော်လည်း ဒီစကားလေးကို သဘောကျတယ်.
ဒီပို့စ်လေးကို ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူး. ရေးတဲ့ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် Label မှာ နာမည်လေး တပ်ပေးထားစေချင်ပါတယ် ခင်ဗှာ.
ကိုရန်အောင်ရေ ဆောရီးနော်။ သမီးသတိမထားမိလိုက်လို့။ အခုပဲ တပ်လိုက်မယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်နော်။
chaos>> မမရေ comment အတွက်ကျေးဇူးနော်။
အနှစ်သာရရှိပြီး ထိရောက်တဲ့ အကြံဥာဏ်လေးတွေ အားပေးစကားတွေ အတွက် အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နောက်လည်း အခုလို စာမျိုးလေးတွေ တင်ပေးပါဦး
လူငယ်ရော လူကြီးတွေပါ အသိပညာ တိုးပွားစေမဲ့နည်း လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုးရေးတတ်အောင် ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမှု တွေလုပ်ပါသလဲလို့လည်း အင်တာဗျူးချင်ပါတယ်
အင်တာဗျူးမယ်ဆိုတော့ မြှောက်သွားပြီ။ :D
အင်း ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ကျောင်းကဆရာမတွေပြောတာရယ်၊ ကျောင်းသားတွေဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာရယ်၊ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေရယ်အားလုံးပေါင်းရေးထားတာပါ။ အဓိကကတော့ အောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ မှတ်ထားလိုက်ပြီး အားလုံးစု ရေးထားတာပါ။ နောက်ရေးပါဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်အခွင့်ကြုံရင်ရေးပါ့မယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။